Iindaba - i-e-LinkCare yaya kwinkomfa ye-ERS yamazwe aphesheya ngo-2018 eParis
I-e-LinkCare yaya kwinkomfa ye-ERS yamazwe aphesheya ngo-2018 eParis
I-2018 European Respiratory Society International Congress yabanjwa ukusuka nge-15 ukuya kwi-19 kweyoMsintsi 2018, eParis, eFrance ngowona mboniso unefuthe kushishino lokuphefumla; yayiyindawo yokuhlangana yeendwendwe kunye nabathathi-nxaxheba abavela kwihlabathi liphela minyaka le. I-e-LinkCare yahlangana kunye neendwendwe ezininzi ezitsha kunye nabathengi abakhoyo behlabathi ngexesha lomboniso weentsuku ezi-4. Kwi-ERS yalo nyaka, uthotho lweemveliso zokuphefumla eziphuhliswe zaze zenziwa yi-e-LinkCare Meditech Co, Ltd kubandakanya iimodeli ezimbini zeSpirometer Systems kunye neWarable Mesh Nebulizer yethu ebonisiweyo.
I-ERS ibingumboniso oyimpumelelo kakhulu kuphuhliso lweeprojekthi ezintsha kunye nokuqala kobambiswano olutsha. Sasikuvuyela ukwamkela iindwendwe kwihlabathi liphela ezazisityelele eG25. Enkosi ngotyelelo lwakho kunye nomdla kuhlobo lwethu.
Ixesha Post: Oct-18-2018
5.2 Igazi leswekile, Ikhithi yokuSimahla yeSwekile yeGazi, IPneumotachograph Spirometer, Iswekile Khangela uMatshini kweyona nkampani, Umatshini wovavanyo lweSwekile yegazi, Ukuzila ukutya kweGazi leShukela 100,